Hlola iTaiwan - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeTaiwan
Bukela ividiyo ekhuluma ngeTaiwan
Hlola iTaiwan etholakala ogwini oluseningizimu-ntshonalanga ye-Okinawa, Japan kanye nasenyakatho kwe Philippines. Isiqhingi silawulwa yi I-Republic of China (ROC) kusukela ku-1945. Yakhelwe ngokulingana njengamazambane amnandi, isizwe sesiqhingi sinabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-23 futhi singenye yezindawo ezinabantu abaningi emhlabeni. Ngaphandle kwamadolobha ayo aminyene, iTaiwan yaziwa nangokuthi kunezintaba eziwugwadule namahlathi acekeceke.
I-Taiwan inezindawo ezinhle kakhulu futhi inhloko-dolobha yayo, Taipei, iyisiko elisebenzayo nokuzijabulisa. I-cuisine yaseTaiwan ibukwa kakhulu nabaseJapan ikakhulukazi ekuthatheni uhambo olufushane ukujabulela ukungenisa izihambi okungabizi kakhulu. Muva nje, ngokuqabuleka kwemikhawulo, kunezinamba ezandayo zokuvakasha kweChina, futhi iTaiwan mhlawumbe iyindawo oyithandayo kakhulu ngamaholide amafushane i-Hong Kong izakhamizi.
IThailand ibilokhu inabantu izinkulungwane zeminyaka izizukulwane ezingaphezu kweshumi nambili ezingezona ezikaHan Chinese. Umlando obhaliwe uqala ngokufakwa ngokwamakhosi eningizimu yeTaiwan yiDashi nengxenye esenyakatho neSpain ekuqaleni kwekhulu le-17th. (Igama elidala laseTaiwan, uForosa, livela kwiPutukezi Ilha Formosa le "siqhingi esihle".) Izifiki zaseHan Chinese zafika ngamanani amakhulu ngokuqala kokuhweba kwaseYurophu. Yize elawulwa amaDashi, umqoqi we-Ming oqotho u-Koxinga wehlula amabutho amaDashi e-1662 wamisa iTaiwan njengoMbuso onqenqemeni we-Ming ngethemba lokuphinda aqukethe iQing China
ITaiwan ekuqaleni yayinabantu bendabuko ababekhuluma izilimi ezahlukahlukene zase-Austronesian, ezihlobene kakhulu neMalay, isiTagalog nesiIndonesia futhi abangokhokho abakhulu IsiPolynesia amatilosi ePacific. Namuhla izizwe ezisele zakha cishe i-2% yabantu, kanti ezinye i-98% zingamaHan Chinese.
Isimo sezulu sasemathafeni asezansi kweTaiwan sisendaweni eshisayo yasolwandle. Ihlobo liyashisa futhi linomswakama futhi ngaphezulu kwe-30 ° C kusuka ngoJuni kuya kuSeptemba. Ubusika buyabanda impela, ikakhulukazi enyakatho yeTaiwan lapho amazinga okushisa angaba phansi njenge-8 ° C. Imvula yaseNyakatho yeTaiwan unyaka nonyaka ngenkathi iThai eseningizimu inabusika obomile. Isikhathi esihle sonyaka sokuhambela sisuka ku-Oct-Dec, yize izivunguvungu ngezikhathi ezithile zingonakalisa ubumnandi. Intwasahlobo nayo imnandi, yize lina lina kakhulu kunangesikhathi ekwindla. Ngenkathi yesiphepho, ugu olusempumalanga luba nomthelela omkhulu lapho libhekene nolwandle iPacific.
ITaiwan igcwele izintaba kakhulu ngeqoqo lezintaba eliqhamuka enyakatho iye eningizimu enkabeni yesiqhingi. Ugu olusentshonalanga luningi lwamathafa futhi ngokungachazeki yilapho iningi labantu ligxiliwe, futhi kulapho wonke amadolobha amakhulu njengeTaichung neKaohsiung etholakala khona. Ugu olusempumalanga nalo lunamathafa athile kepha lunabantu abaningi kakhulu ngenxa yengozi yesiphepho ephakeme. Kuyikhaya nasemadolobheni aseHualien naseTaitung anabantu abaningi abalulekile.
I-baseball yalethwa eTaiwan ngabaseJapan phakathi nenkathi yamakoloni. Ukuthandwa kwawo kukhuphuke kakhulu lapho iqembu le-baseball laseTaiwan liqeda okwesibili emiqhudelwaneni kazwelonke yaseJapan. Namuhla, i-baseball igcina ukulandela okuqinile futhi iqhubeka nomdlalo weqembu owaziwa kakhulu eTaiwan. Abadlali abaningana baseTaiwan badlulele nasemisebenzini eyimpumelelo e-US naseJapan Major League baseball (MLB) kanye namaqembu esizwe eTaiwan abhekwa njengelinye lamaqembu anamandla emhlabeni.
Ngaphandle kwe-baseball, i-basketball nayo inokulandelwa okungafani eTaiwan futhi ithandwa kakhulu yintsha. Lapho amakilasi esephelile, izinkantolo ze-basketball ngaphakathi ezikoleni azivuleli abafundi kuphela kodwa nomphakathi.
UBilliard ungomunye umdlalo odumile eTaiwan. Kulula ukuthola amakamelo we-billiard ezweni lonke futhi kunabadlali abaningi abazuze umpetha eTaiwan, iningi labo eliqale ukuziqeqesha lapho lisencane.
Eminye imidlalo edumile ibandakanya iTaekwondo, ithenisi yetafula negalofu.
Izifunda - amadolobha - ezinye izindawo eTaiwan
Iminyaka yokushayela esemthethweni eTaiwan yi-18. ILugengen, i-automaker yaseTaiwan ithandwa kakhulu.
Kudingeka ilayisense yokushayela eyenziwa eTaiwan futhi ingahle isetshenziselwe izinsuku ezifika ku-30, ngemuva kwalokho uzodinga ukufaka isicelo semvume yendawo. Abanye omasipala bangabeka eminye imikhawulo, ngakho-ke hlola kusengaphambili ngesitolo sokuqasha.
Uhlelo olukhululekile lwenqola eTaiwan luhle. Bahlanganisa izingxenye eziningi zesiqhingi futhi basesimweni esihle kakhulu. Izimpawu eziningi zomgwaqo zisezimpawu zamazwe omhlaba, kepha izimpawu eziningi zibonisa amagama ezindawo nezitaladi zaseTaiwan kuphela. Noma kunjalo, cishe zonke izinkomba ezisemthethweni eziqondisiwe zizobhalwa ngesiTaiese nesiNgisi. Kodwa-ke, amaRoma angaguquki nhlobo asho ukuthi amagama esiNgisi angahluka phakathi kwezimpawu zomgwaqo, awenze ube nodidayo.
I-Taiwanese Mandarin ibilokhu ilulimi olusemthethweni lokuqala selokhu kwasungulwa i- I-Republic of China eTaiwan phakathi nokubusa kweKuomingtang ku-1949. Ukusuka ku-2018 kuya phambili, izilimi zomdabu zaseTaiwan nesiHakka Chinese zithuthukiswa ezilimini ezisemthethweni zaseTaiwan.
Uma unenkinga yokuthola abantu abakhuluma isiNgisi, zama ukubheka abafundi basekolishi noma abafundi bezikole eziphakeme. Ezindaweni zamathikithi, ithuba elingcono yilabo abanama-ejenti weminyaka yabafundi.
Intsha ngokuvamile ikhuluma okuyisisekelo okuguqukayo kwesiNgisi, ikakhulukazi ngesiTaipei. Izingane zivame ukuqonda isiNgisi ukwedlula abazali bazo, ikakhulukazi ngokugcizelelwa kwemfundo yolimi lwesiNgisi namuhla, nesiNgisi siyindaba ephoqelekile ezikoleni zaseTaiwan. Kodwa-ke, imizamo yokukhuluma isiMandarin, iTineseese Minnan noma iHakka izotholwa ngokuamamatheka nokukhuthazeka okukhulu.
Cherry Blossom Season - Yonke intwasahlobo, eYangmingshan.
I-Hot Springs - Indawo yokuhlala yaseTaiwan phakathi komsele olwandle nohlelo lwentabamlilo ikwenza kube indawo enhle yamaholide okushisa. Kunezindawo eziningi ezazihamba lapho kukhona izwe lonke, kubandakanya iBeitou, Wulai neYangmingshan.
Ngenkathi ukugembula kungekho emthethweni eTaiwan, i-mahjong isathandwa. Uhlobo lomdlalo lwaseTaiwan luyehluka kakhulu ezinhlotsheni zamaCantonese nezaseJapan ezaziwa kangcono, ikakhulukazi ngoba isandla siqukethe amathayili we-16 esikhundleni se-13 asetshenziswe kwenye inguqulo. Kodwa-ke, ihlala iyinto yomndeni nabangane futhi azikho izikhangiso zomphakathi ezikhangiswa esidlangalaleni.
Yini ongayithenga eTaiwan
Ukudla - isiphuzo eTaiwan
ITaiwan ihlala ihlangabezana nezivunguvungu phakathi nezinyanga zasehlobo kanye nokuwa kokuqala, ikakhulukazi ku-East Coast. Imvula esindayo enkulu futhi iba khona ehlobo. Abaqwala izintaba nabamele izintaba kufanele baqiniseke ukuthi babheka imibiko yesimo sezulu ngaphambi kokuya ezintabeni. Ingozi enkulu kulandela imvula enkulu ezintabeni ukuwa kwamadwala okubangelwa ukuthambisa komhlaba futhi kunemibiko yesikhathi esithile sokubulawa kwabantu noma ukulinyazwa yilaba.
ITaiwan nayo itholakala kwiPacific Ring of Fire, okusho ukuthi ukuzamazama komhlaba yinto eyejwayelekile. Ukuzamazama komhlaba okuningi akubonakali, yize umphumela ungangezelwa kancane kulabo abakwezakhiwo eziphakeme. Ngenkathi amakhodi esakhiwo sendawo eqine kakhulu, ukuqaphela okujwayelekile kufanele kusabhekwe ngenkathi kuzamazama umhlaba, kubandakanya nokuvula umnyango wokuvikela ukuthi ungashayeki, uthathe ikhava futhi uhlole nokuvuza kwegesi ngemuva kwalokho.
Izindawo zasendle zaseTaiwan ziyikhaya lezinyoka eziningi ezinobuthi, kufaka phakathi inyoka enziwe ngoqalo, inyoka kaRussel, i-bandra krait, inyoka yamakhorali, i-cobra yaseChina, iThabani habu, kanye ne- "pacer" eyikhulu. Izinyathelo zokuvikela ukulunywa yinyoka zifaka nokwenza umsindo omningi lapho uhamba, ugqoke ibhulukwe elide nokugwema izindlela ezandisiwe. Iningi lezinyoka ziyasaba abantu, ngakho-ke uma wenza umsindo uzobanika isikhathi sokubaleka. Ukuhamba buthule kusho ukuthi ungazethusa ngokungazelele futhi ubangele ukuhlaselwa. Inyoka kaRussel, engenye yezinyoka eziyingozi kakhulu eTaiwan, kuyinto ehlukile… imvamisa ikhetha ukumelana nokusongelwa.
AbaseNtshonalanga kufanele baqaphele ngokudla okungaphekiwe. Izindawo eziningi zokudlela zaseTaiwan zinikeza izingcwecwe zenyama eluhlaza ebomvu, enosiwe kanye nokudla kwasolwandle okungaphekiwe okulethwa etafuleni futhi kungadonswa izigaxa noma kufakwe ebhodweni lesitoko. Njengoba lokhu kuba yingxenye yokudla kwaseTaiwan, noma yimaphi amagciwane angahlala angabathinti abantu bendawo, kepha angadala udlame nabokufika. Umgomo ongcono kakhulu ngukuthi uqiniseke ukuthi ukupheka ukudla ngendlela ojwayele ngayo.
Musa ukuphuza amanzi ompompi ngaphandle kokubilisa, noma kuphephile ukuxubha amazinyo akho.
Amakhekhe e-Inthanethi maningi, yize kungadingeka uzulazule ngaphambi kokuwathola. Esikhundleni salokho, amathofi e-Intanethi eTaiwan kufanele abizwe ngokuthi ikhefi lokudlala. Lokhu kuvame ukutholakala esitezi sokuqala noma sesibili sesakhiwo, futhi kufakwe izihlalo ezintofontofo kakhulu nezikrini ezinkulu. Yize abantu beyisebenzisa i-Intanethi, iningi labantu ngokuyinhloko liya lapho ukuthola okuhlangenwe nakho kokubheja kwe-inthanethi. Eminye imishini ezindaweni zokudlela ze-inthanethi isebenza ngohlamvu lwemali. Ngokufinyelela kwe-inthanethi kwamahhala emadolobheni amakhulu, zama imitapo yolwazi yasendaweni.
Uhulumeni waseTaiwan unikeza insizakalo yamahhala ye-Wi-Fi ezweni lonke ebizwa iTaiwan, kanti iDolobha laseTaipei linikeza insizakalo yamahhala ye-Wi-Fi ezindaweni eziningi zomphakathi namanye amabhasi amadolobha abizwa nge-TPE-Free. Ukubhalisa kuyadingeka kepha i-akhawunti eyodwa ihlanganisa zombili izinsizakalo. Uma unefoni ephathekayo evela emazweni akhethiwe ingenziwa ku-inthanethi; ngaphandle kwalokho, ulethe ipasipoti yakho esikhungweni semininingwane yezivakashi esikhumulweni sezindiza, iziteshi ze-MRT njll, futhi abasebenzi abanomusa bazokwenzela wena. AbakwaMcDonald kanye ne7-Eleven bahlinzeka nge-Wi-Fi yamahhala.